FAA waxay aag duulimaad ka samaysay buundada Texas oo ay ku xayirnaayeen 10,500 muhaajiriin sharci darro ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » FAA waxay aag duulimaad ka samaysay buundada Texas oo ay ku xayirnaayeen 10,500 muhaajiriin sharci darro ah
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Dad aad u tiro badan oo muhaajiriin sharci -darro ah ayaa ku urursan buundada hoosteeda maalmihii la soo dhaafay, iyadoo Duqa Del Rio Bruno Lozano uu tiradaasi ka dhigay in ka badan 10,500 illaa habeenimadii Khamiista, isagoo sidoo kale ugu baaqay Madaxweyne Joe Biden inuu wax ka qabto “qalalaasaha socda” ee ka jira xadka Texas. magaalada.
FAA waxay dejisay aag aan duulimaad lahayn laba toddobaad oo loogu talagalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dul mara Buundada Del Rio ee Koonfurta Texas.
In ka badan 10,000 oo muhaajiriin sharci -darro ah ayaa isugu soo ururay buundada Del Rio ee Texas maalmihii la soo dhaafay.
Aagga duullimaadka ee FAA ayaa lagu soo rogay codsi ka yimid Ilaalada Xuduudaha Mareykanka oo sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay faragelin ku hayaan duullimaadyada fulinta sharciga.
Maamulka Duulista Hawada ee Mareykanka (FAA) ayaa soo saaray ogeysiis ku dhawaaqaya aag 14 maalmood ah oo aan duulimaad lahayn oo loogu talagalay nidaamyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn (UAS) ee dul mara Buundada Del Rio ee xadka Mareykanka iyo Mexico, koonfurta Texas.
Isagoo tixraacaya “sababo ammaan oo gaar ah” FAA ayaa mamnuucday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dul heehaabaya Buundada Del Rio halkaas oo in ka badan 10,000 oo muhaajiriin sharci -darro ah ay isugu soo urureen, taas oo ka hor -istaagtay warbaahinta maxalliga ah inay qabsadaan muuqaalka hawada ee goobta.
The FAA Mamnuucidda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxaa markii ugu horraysay tabiyay Fox News oo ah urur maxalli ah, kaas oo hore u qabsaday muuqaallo cirka ah oo muujinaya tiro badan oo muhaajiriin ah oo buundada hoosteeda buuxiyay. Waqtiga muuqaalka la faafiyey subaxnimadii Khamiista, waxaa lagu qiyaasay ilaa 8,200 oo qof inay joogeen goobta, in kasta oo duqa magaaladu soo jeediyay in dadku ay korodhay 2,000 oo kale ama wax ka badan saacadihii ka dambeeyay. Tahriibayaal badan ayaa la sheegay inay yihiin Haiti.
In kasta oo ogeysiiska bilowga ah ee FAA uu ku sheegay kaliya “walaac” amni, haddana war ay heshay warbaahinta ayaa lagu sheegay in aagga duullimaadka lagu soo rogay codsi ka yimid Ilaalada Xuduudaha Mareykanka, oo sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn “ay faragelin ku sameeyeen duulimaadyada fulinta sharciga ee xadka. ” Hay'addu waxay intaas ku dartay, si kastaba ha ahaatee, in warbaahinta laga yaabo inay awood u yeelato inay codsato ka -dhaafitaannada si ay u sii waddo hawlgalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee aaggaas.
Gudoomiyaha Gobolka Texas Greg Abbott ayaa sidoo kale ujeedo u leh Biden arrimaha xadka, isagoo sheegay in jawaabta maamulka ay tahay “wax laga naxo” iyo mid ka mid ah “dayacaad cad”. Goor hore oo khamiistii ah, gudoomiyaha ayaa faray mas'uuliyiinta maxalliga ah inay xiraan lix meelood oo laga soo galo soohdinta koonfureed "si loo joojiyo safarradan [muhaajiriinta ah] inay ka badiyaan gobolkeenna."
Del Rio waa mid ka mid ah saddex darsin oo kale dhibcaha isgoyska ku teedsan xadka Texas-Mexico. Muhaajiriinta imanaya isgoysyadan waxay codsan karaan magangalyo ama waxay isu soo dhiibi karaan Ilaalada Xuduudaha si loo xiro kadibna loo sii daayo Mareykanka, iyadoo siyaasaddii Obama ee 'qabashada iyo sii deynta' uu Madaxweyne Biden dib u soo celiyay horaantii sanadkan. Biden ayaa sidoo kale isku dayay inuu meesha ka saaro siyaasaddii madaxweynihii hore ee Donald Trump ee 'Ku Joog Meksiko', taasoo ku qasabtay qaxooti-doonka qaarkood inay sugaan dacwadaha socdaalka ee ka baxsan Mareykanka, in kasta oo Maxkamadda Sare ay laashay tallaabadaas, iyagoo ku dooday in Biden uusan raacin tallaabooyinka habboon. jooji dhaqanka.